Namela ny Vavolombelona Hanatrika Fivoriambe ny Fitsarana any Israely
HAMAKY AMIN'NY TENY Afrikaans Albaney Alemà Anglisy Armenianina Bicol Danoà Espaniola Estonianina Failandey Frantsay Ga Grika Géorgien Holandey Hongroà Indonezianina Iokrenianina Italianina Japoney Kinyarwanda Koreanina Kroaty Litoanianina Malagasy Mandarin Nentim-paharazana Mandarin Notsorina Norvezianina Poloney Portogey Romanianina Rosianina Sepedi Serba Serba (Soratra Romanina) Slovaky Slovenianina Soedoà Tagalog Tiorka Tseky Éwé
29 JONA 2015
Manohana ny Zon’ny Vavolombelona Hanatrika Fivoriambe ny Fitsarana Avo any Israely
Narovan’ny Fitsarana Avo any Israely sy ny polisy ny zon’ny Vavolombelon’i Jehovah hanao fotoam-pivavahana. Nisy didy navoakan’io fitsarana io vao haingana, izay nanery ny tanànan’i Ra’anana mba hanaja ny fifanarahana nataony tamin’ny Vavolombelona. Efa raikitra mantsy hoe hanofa ny kianja iray fanaovana fanatanjahan-tena ao amin’io tanàna io izy ireo. Noteren’ny fivavahana hafa ny Biraon’ny Tanànan’i Ra’anana ka nolaviny ny fangatahan’ny Vavolombelona hanao fivoriambe, iray andro sy tapany tsy hanombohan’ilay fivoriambe voalohany.
Nolavin’ny fitsarana ny fanavakavahana nataon’ny biraon’ny tanàna
Nanao fifanarahana tamin’ny tanànan’i Ra’anana ny Vavolombelon’i Jehovah fa hanao fivoriambe ny 18 Aprily sy ny 2 Mey 2015. Nanahy ny Vavolombelona hoe mety hofoanana ilay izy rehefa nilaza ny mpiandraikitra ny tanàna ny 15 Aprily fa matahotra ny hisian’ny korontana izy amin’io 18 Aprily io. Na dia efa nanome toky aza ny sefon’ny polisy teo an-toerana fa tsy misy tokony hatahorana, dia mbola nofoanan’ny tanànan’i Ra’anana ihany ilay fifanarahana, ny andro nanaraka. Nilaza ny fampitam-baovao fa tsy navelan’ilay tanàna hanao fivoriambe ny Vavolombelon’i Jehovah, noho ny fandrahonan’ny mpikambana ao amin’ny filan-kevitry ny tanàna, izay mpivavaka be. Tsy hanohana ny mpitondra eo amin’ilay tanàna intsony, hono, izy ireo raha ekena ilay fivoriambe.
Avy hatrany dia nandefa fitarainana tany amin’ny Fitsaram-paritr’i Lod ny Vavolombelona mba hanerena an’ilay tanàna hanaja ny fifanarahana nataony. Tsy hivoaka alohan’ny 18 Aprily intsony anefa ilay didim-pitsarana satria efa akaiky loatra ilay fotoana. Afaka nanofa toerana hafa ny Vavolombelona saingy tsy maintsy nandoa avo enina heny tamin’ny hofan’ilay kianja nifanarahana tamin’ilay tanàna.
Namoaka didim-pitsarana ny Fitsaram-paritr’i Lod tamin’ny 29 Aprily. Nasaina nanaja ny fifanarahana nataony ilay tanàna. Voalaza tao amin’ilay didy fa “tsy nanaja ny zo [an’ny Vavolombelon’i Jehovah] voalazan’ny Lalàm-panorenana ny Biraon’ny Tanàna [any Ra’anana]. Ireto avy izany: Ny zo hanana fahalalahana ara-pivavahana, zo hanao fivoriana, zo hohajaina sy hanana fahalalahana, ary ny zo hitovy amin’ny olon-drehetra.” Nampakatra avy hatrany an’ilay raharaha tany amin’ny Fitsarana Avo ilay tanàna, nefa nolavina izany tamin’ny 1 Mey. Nampakatra fitsarana indray ry zareo tatỳ aoriana, fa mbola nolavina koa izany. Ilay didy navoakan’ny Fitsaram-paritra àry no manan-kery.
Narovan’ny polisy ny Vavolombelona
Tonga ara-potoana ny didim-pitsarana navoakan’ilay Fitsarana Avo, ka afaka nanao fivoriambe tao amin’ilay kianja ny Vavolombelon’i Jehovah ny 2 Mey. Nanao zavatra hanoherana an’izany anefa ny mpitondra fivavahana teo an-toerana, anisan’izany ny mpitondra fivavahana jiosy sy ny mpikambana mafana fo ao amin’ny ortodoksa. Mody nikarakara “vondrom-bavaka” izy ireo ary tokotokony ho 1 500 ny olona nanatrika azy io. Nivory teo anoloan’ilay kianja izy ireo rehefa tonga ny Vavolombelona 600 mba hanatrika an’ilay fivoriambe. Nivadika tampoka ho fihetsiketsehana anefa ilay “vondrom-bavaka.” Nisy tamin’ireo mpanao fihetsiketsehana nanafika ny Vavolombelona, ka nanompa, nandrora, nanao fihetsika mamoafady, ary nanimba ny fiaran’izy ireo. Anisan’ny niharan’izany ny vehivavy sy ny ankizy. Vetivety dia tonga ny polisy mba hisakana an’ireo mpanao fihetsiketsehana ireo. Afaka nankafy ny fivoriambeny àry ny Vavolombelona sady afaka nody soa aman-tsara tany an-tranony rehefa nirava ilay izy.
Mankasitraka ny manam-pahefana ny Vavolombelon’i Jehovah any Israely. Nanohitra ny fanavakavahana fivavahana mantsy izy ireo, ka niaro ny zon’ny Vavolombelona hanao fotoam-pivavahana.
Fivoriamben’ny Vondrom-paritra Manokana Tany Israely